I-Mate 20 Pro ifumana amanqaku angaphezu kwama-310K kwi-AnTuTu | I-Androidsis
I-Huawei Mate 20 Pro iya kuba yeyona fowuni inamandla kulo nyaka, ngokweemvavanyo ze-AnTuTu
Kwi-Okthobha elandelayo 16, IHuawei izakuveza iiflegi zayo ezilandelayo, iMate 20 kunye Umlingani 20 Pro, Abantakwabo abadala Umlingani 20 Lite sele iphehlelelwe njengaphakathi kuluhlu oluphakathi kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo. Zonke iinkcukacha kunye neempawu ziya kubhengezwa kulo msitho, ngaphandle kokutyhila idatha esele ivuza.
Kuninzi okulindelweyo kuzo zombini iitheminali, nangona kunjalo ngakumbi kwi-Mate 20 Pro, njengoko Iya kuba yeyona nto iphambili kwezi kunye nesona sixhobo sinamandla kwinkampani yaseTshayina. Le fowuni yokusebenza ephezulu iya kuxhotyiswa ngeyona nto ibhetele, ukwenzela ukukhuphisana nezixhobo ezintsha ze-Apple kunye nezixhobo eziphezulu ezivela kwezinye iinkampani, eziye zinevithamini.
Kungekudala, I-Mate 20 Pro iphumelele iimviwo ze-AnTuTu, Ibhentshi lokulinganisa elidumileyo elichaza amandla eefowuni ngovavanyo lwayo. Njengomphumo wokugqibela, el Uluhlu oluphezulu emva kokuvela wafumana amanqaku angama-313.561, ecace gca ukuba iphezulu kunayo nayiphi na iselfowuni esungulwe kulo nyaka.
Uninzi lweefowuni ze-Android ezixhaswe yi-Snapdragon 845 ziye zafumana amanqaku angama-290 amawaka e-AnTuTu. Amanqaku okuthelekisa ama-20 Pro abonisa ukuba I-Kirin 980 igqwesa iQualcomm's Snapdragon 845 chipset.
Funda ngokugqithisileyo: Ezona Fowuni zinamandla ka-Agasti ka-2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-Apple iPhones esandula ukubhengezwa, enje nge-iPhone XS, i-iPhone XS Max, kunye ne-iPhone XR, zixhotyiswe yi-12nm Apple A7 chipset. Amanqaku onke ebhentshi eMate 20 isemva kwe-iPhone XS, ebhalise amanqaku angama-363.525 kwiimvavanyo zokulinganisa. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba amanqaku e-Mate 20 Pro's AnTuTu anokuba yeyunithi yangaphambi kwemveliso. Ke ngoko, inqaku lokulinganisa lokwenyani lemveliso yokugqibela linokwahluka nje ukuba ekugqibeleni likhutshiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Huawei Mate 20 Pro iya kuba yeyona fowuni inamandla kulo nyaka, ngokweemvavanyo ze-AnTuTu
Umphathi omkhulu we-OnePlus uyenza icace into: ukususa i-audio jack bekusisigqibo esinzima
Ufikelela njani kwi-Samsung Cloud kwikhompyuter